Izinto Silindele Xa Dating a Isitshayina Umfazi Ngokwenene Isitshayina Hetalia
Makhe sifumane le phezu kunye kanye kwaye bonke. Ufuna umhla Isitshayina abafazi.
Kodwa babekhona ke abaninzi okulindelweyo kwaye misconceptions malunga ezi abafazi ukuze sibe andazi yintoni real kwaye ngubani na. Isitshayina abafazi ukusuka mainland China ingaba kulungile ezahlukileyo ukususela Isitshayina abafazi uza kuhlangana kwi-Hong Kong, Singapore, Etaiwan, okanye abo wakhulela overseas. Kweli nqaku, siza ikakhulu kugxila okulindeleyo ukusuka dating mainland Isitshayina abafazi. Nkqu bale mihla phinda-phinda kwaye impembelelo ye-western inkcubeko, kukho amanye amaxabiso ukuba bahlala kwaye mhlawumbi ayinakuze ibe uye kwi Isitshayina iintsapho.”Usapho sele ixesha elide ukuba iqhosha eliluhlaza ngaphakathi Isitshayina society, kwaye abaninzi imiba Isitshayina ubomi kusenokuba iqinisiwe ukuba honoring omnye ke, abazali okanye ancestors.”Omnye abo kukuba ube phezulu respects ebazalini babo, oomawomkhulu, kwaye ancestors. Enye kukuba Isitshayina abafazi (uninzi kodwa asingabo bonke) ingaba? abahlala kunye nabazali babo okanye umgcini ngokusemthethweni nkqu nokuba babe sikwi ndawo yabo isemthethweni ubudala. Oku ngenxa yokuba ingaba ngokusondeleleneyo knit kunye neentsapho zabo. Mhlawumbi baya kuphila phantsi efanayo kophahla okanye kwenye indawo nje vala yabo hometown. Kodwa xa dating, usapho lwabo ke uluvo lwakhe malunga uza kuba nempembelelo enkulu kwindlela indlela yakho kubudlelwane iya sebenza. Ukuba usapho lwabo ke perception kuni ilungile, ngoko ke kufuneka ukuba omnye lucky guy. Kodwa ukuba ke enye indlela jikelele, wena anayithathela onayo ukuba ababonise ukuba ukhe ubene enyanisekileyo, nzima-iyasebenza, kwaye ayikwazi anike okulungileyo ikamva labo nentombi. Xa uqala ku-umhla Isitshayina abafazi, uyakwazi silindele ukuba uninzi uza kuhlangana izakuba ngaphezulu kwi esiqhelekileyo icala. Yintoni esiqhelekileyo kuba Isitshayina abafazi. Ngaphezulu kusenokwenzeka ukuba, abo silindele abantu ukuthatha baphile. Ingakumbi xa nisolko ngaphandle kokuya kwi imihla.
Ngoko ke, isicwangciso ozayo
Sazi apho ukuthatha yakhe, khetha yakhe phezulu ukusuka kwi endaweni yakhe, vula doors kuba yakhe, tsala ngaphandle kwayo isitulo, njalo njalo. Oku misconception ukuba lunika Isitshayina abafazi njengoko submissive(apho abakho.) Kodwa Isitshayina dating inkcubeko, indoda leyo ethe yenza kakhulu iinzame nabafazi ingaba ukulandela baphile. Kodwa oku kuza tshintsha ngexesha kanye abo bonisa zabo real uphawu xa sukuba. ngakumbi ethambileyo kunye nawe. Kwi-China, kubalulekile ikakhulu waziwa njengo”Ubuso”apho uhlobo ebaluleke thanda reputation okanye abantu ke impression kuni. Ungakhetha noba”bafumane”okanye”wawulahla umphefumlo”ubuso kuxhomekeke ubume bakho, usapho lwakhe ngasemva, kwaye achievements. Kuba Isitshayina abantu, lento obaluleke kakhulu ingakumbi eziqhelekileyo kwaye yenkcubeko evakalayo. Nangona foreigners ayikwazi ikakhulu get kude la kodwa omnye lowo uza kuphulukana nayo ubuso iya kuba Isitshayina umfazi ukuba ukhe ubene kunye. Ngoko ke lumka kunye izenzo zakho ngenxa yokuba uya kuchaphazela yakhe. Kuba budlelwane nabanye ukuba umsebenzi, wena umlingane wakho kuya kufuneka ukuba ibe honest kwaye vula ngamnye enye. Kodwa Isitshayina abafazi thatha honesty kwi-wonke entsha inqanaba (kodwa elungileyo indlela.) Ukuba yena izaziso, kukho into engalunganga, yena uza kukuxelela ilungelo kude. Nokuba ukuba ke ngenxa abancinane izinto njenge nani ekubeni barbeque sauce zonke phezu kobuso benu okanye kokufuna ukuba tuck yakho shirt, yena ndiya kukuxelela. Oku kubaluleke ngakumbi njenge yena ufuna ukuba ube eyona inguqulelo ngokwakho. Ukuba ngu-hayi uthando, ke thina andazi yintoni. Uninzi Isitshayina abafazi asingawo kwi-casual dating kwaye omnye-busuku injalo. Nangona asingabo bonke, kodwa uninzi. Kodwa oku kuza kanjalo kuxhomekeka yintoni isixeko kwi-China kufuneka zibekwe khona kwaye intlanganiso abafazi. Abafazi kuzo enkulu izixeko ngathi i-shanghai kwaye Beirut ingaba ngakumbi westernized ngoko ke awunokwazi silindele ukuba wonke kubekho inkqubela uza kuhlangana sele umtshato engqondweni. Kodwa uyakwazi silindele ukuba abafazi uza kuhlangana ngaphandle omkhulu izixeko ingaba ngokuqinisekileyo uye ezinzima budlelwane nabanye abaya uninzi kusenokwenzeka ukuba end emtshatweni. Bottomline, kufuneka ube gca malunga yakho dating izinto ezikhethekayo ze-kwaye uthethe ngayo ngaphandle kunye naye. Elungileyo kwaye honest ngxoxo malunga ntoni kunye ufuna kwi budlelwane uza cacisa izinto ngaphandle kwaye enze izinto lulonke ulote lula. Wonke umntu na nationality okanye umbala zizodwa kowabo indlela. Nangona kukho amaxesha ukuba xa oko iza nationality, abantu nokutya efanayo etiquettes kwaye mannerisms ngenxa nationwide yenkcubeko impembelelo. Nto ngokugqibeleleyo eqhelekileyo. Xa dating Isitshayina abafazi, awunokwazi bakholelwa ukuba ngenxa yokuba abanye zaziwa ngokuba ezithile accomplishments akuthethi ukuba kuthetha ukuba lonke, abantu behlabathi of China bamele kanjalo efanayo. Nazi ezinye ngokufanayo misconceptions malunga dating Isitshayina abafazi: Nje ngenxa yakho girlfriend ngu Isitshayina, awunokwazi silindele ukuba yena uyayazi indlela cook wonke Isitshayina dish.
Hayi wonk ubani passion bepheka
Abantu rhoqo ukuba ukuze babe. submissive xa eneneni, abo nje kufuneka ixesha ukuze ufumane ethambileyo kunye ubekho. Musa bacinga ukuba bonke abafazi kwi-China ingaba efanayo ngenxa abekho. Nangona wonke umntu abe kuba abanye similarities ngenxa inkcubeko, kodwa ke ukuba ngenene eyodwa ukusuka omnye nomnye kunye ezahluka-hlukileyo personalities kwaye uluhlu lwezinto ezikhethwayo
← Iindlela Ukufumana a Guy ukuba Isaziso Kuwe ngendlela Club - China Dating Ividiyo Incoko
Incoko Roulette: Dating kunye Chatroulette Girls →